Ahoana ny fomba hananana WhatsApp amin'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hananana WhatsApp amin'ny Apple Watch
Ny fiandrasana hahafahana mampiasa WhatsApp amin'ny Apple Watch dia toa tsy misy farany. Tsy tadidinao akory ny fotoana nanombohan'ny Telegram ny fampiharana ho an'ny Apple Watch, ary Na izany aza, ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo indrindra manerantany dia manohitra ny fananana kinova izay azo ampiasaina amin'ny famantaranandro Apple.
Na izany aza, mifarana ny fiandrasana rehetra, ary na dia tsy ofisialy aza izany dia efa manana vahaolana hahafahana mampiasa WhatsApp amin'ny Apple Watch izahay. Izahay dia nandramana ny WhatchUp, fampiharana iray ahafahanao mamaky hafatra, mijery sary ary mandefa hafatra WhatsApp avy amin'ny Apple Watch. Ato amin'ity horonan-tsary ity dia asehonay anao ny fomba handrindrana sy hampiasana an'ity rindranasa ity.
Fampiharana misy karama izany, saingy azo antoka fa ho an'ny maro dia manonitra ny takalon'ny fahafahany mampiasa WhatsApp amin'ny Apple Watch. Tsy misy hafetsena na fitaka izany, ny zavatra ataony dia ny fametrahana tranokala WhatsApp amin'ny famantaranandronao, tsy maintsy scan ny kaody QR sy ny zavatra rehetra hampandeha azy. Ny fametrahana dia tsy sarotra manaraka ny torolàlana asehon'ny fampiharana sy ny famataran'ora, tahaka ny asehonay ao amin'ny horonantsary.
Raha vantany vao voalamina, dia maivana ny fampiasana azy. Ho afaka hiditra amin'ny resaka rehetra ataonao ao amin'ny WhatsApp ianao, na dia misy hafatra maro aza ao amin'ny sasany, dia mety tsy haseho feno izy ireo. Tsy dia fahakiviana izany, satria tsy azoko antoka fa hisy olona hijerena hafatra amin'ny Apple Watch. Ny fampiharana dia manao ny asany tonga lafatra: afaka mijery hafatra ianao, ao anatin'izany ny sary, ary afaka mandefa hafatra amin'ny alàlan'ny fanoratana am-peo, sora-tanana na emojis ianao. Raha izany, raha manana olana amin'ilay fiteny ianao, dia lazainy aminao ny fanovana azy amin'ilay tianao. Raha mbola miandry ny fampiharana ofisialy ho tonga amin'ny Apple Watch izahay, ity dia vahaolana tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fomba hananana WhatsApp amin'ny Apple Watch
Ny app dia mbola ao amin'ny app store, ao amin'ny lahatsoratra novakiako fa tsy izany
Marina izany. 2,29 € ny vidiny.
Azo antoka ve ireo karazana fampiharana ireo?
Manome azy ireo 2,4 avy amin'ny 4 izy ireo
Serra dia hoy izy:
Milaza ianao fa mila fotoana kely handefasana ilay fangatahana amin'ny famantaranandro fa hadinonao fa tsy misy App ho an'ny ipad na PC akory izy. Tsy isalasalana fa ny whatsapp dia ampiasain'ny mpampiasa azy fa tsy noho ny kalitaony, satria efa telegram io.
Valiny tamin'i Serra
jovi dia hoy izy:
Tsy hizaha kaody qr
Mamaly an'i jovi
Sarany ny asa fa ny famindrana azy lavitra kely noho ny kaonty no amakiany azy
Hitako fa misy safidy hafa antsoina hoe whatschat, tsy haiko raha nisy nanandrana ireo safidy roa izay hiasa tsara kokoa, manana fiambenana aho izao ary handeha amin'ny kinova faharoa dia tsy ratsy izany
Nametraka azy aho, saingy misy olana be dia be, tapaka izy ary ny fifampiresahana amin'ny famantaranandro dia tsy havaozina (Apple Watch 3), raha te hampifandray indraindray dia tsy izy, ka naveriko izany ary nangatahako ny fiverenany paoma. Ary efa nataon'izy ireo niverina aho, misaotra !!!
francin dia hoy izy:
Manana safidy handefa audio mivantana ve ianao? Tsy mila didy jadona aho, ary raha afaka mihaino audios koa ianao amin'ny fiambenana dia efa nisy nanandrana an'izany? Misaotra!
Mamaly an'i francin
Ahoana no nangatahanao famerenam-bola? inona ny antony nomenao?
Tsy afaka manao an'izany
Miditra any amin'ny hache ianao, mahazo ilay tatitra momba ny baran'ny bar, ary toa izao no izy satria heveriko fa voarara ny rohy tena izy, na dia tsy tokony ho tompon'andraikitra aza izany.
avy eo miditra ianao, tadiavo ilay fampiharana tianao hiverina ary manokatra drop-down izay milaza safidy maromaro, safidio ilay milaza fa te hamerina ilay fampiharana ianao ary voila. (manana 14 andro hiverina ianao)
Banga izany. Tsy mandeha izy io. Miala amin'ny fotoana rehetra izy, tsy mampifandray ... fako
Claudiocsv dia hoy izy:
Tsy mandeha izy io, aza mividy azy, tsy apetraka amin'ny Apple Watch rehetra izy io noho izany dia tsy mampifandray izany. Vaovao tsy feno
Valiny tamin'i Claudiocsv
Fanitsiana sy fanehoan-kevitra be dia be: Taorian'ny fitsikilovana, nampiasa ny fomba tsotra namerenako ny iPhone aho ary ao no apetraka ary hita ao amin'ny Apple Watch.
Nanandrana ny fiambenana sy ny fiambenana aho ary azoko lazaina fa ny farany dia mandeha tsara kokoa ary ny mpandraharaha dia manavao azy tsy tapaka miaraka amin'ny fanatsarana
Valiny tamin'i Ricky Garcia
Rae dia hoy izy:
Mandra-pahatongan'ny appel dia namaky aho
Valiny amin'i RAE
"Errata" no iantsoana azy. Misaotra betsaka, manitsy azy aho.
Apple dia manolotra fihenam-bidy 50% ho an'ireo mpiasa izay mividy HomePod
Tsy voatery niandry ela akory izahay, fa misy ny TV YouTube ao amin'ny Apple TV